WhatsApp Business အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
4.2 | 500,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（40.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် WhatsApp Business
Facebook မှ WhatsApp လုပ်ငန်းတွင် WhatsApp Business သည် WhatsApp လုပ်ငန်းတွင် WhatsApp စီးပွားရေးသည်သင့်အားစီးပွားရေးအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရရှိစေရန်, သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်ပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေရန်ကူညီပေးပါ။
အကယ်. သင့်တွင်သီးခြားစီးပွားရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနံပါတ်များရှိပါက WhatsApp စီးပွားရေးနှင့် WhatsApp Messenger ကိုဖုန်းဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးကွဲပြားသောကိန်းဂဏန်းများဖြင့်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
ရရှိနိုင်သောအင်္ဂါရပ်များအပြင် WhatsApp Messenger တွင် WhatsApp လုပ်ငန်းတွင် -
•စီးပွားရေးပရိုဖိုင် - သင်၏0က်ဘ်ဆိုက်, တည်နေရာသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကဲ့သို့ - သင်၏0က်ဘ်ဆိုက်, Messaging Tools: သင်၏ဖောက်သည်များကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျပို့သောအခါသင်၏ဖောက်သည်များကိုပို့ရန်သို့မဟုတ်နှုတ်ဆက်ရန်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များအားပိုမိုတုံ့ပြန်ပါ။
•ကြိုးဖုန်း / ပုံသေနံပါတ်အထောက်အပံ့ - သင် WhatsApp စီးပွားရေးကိုဖုန်းလိုင်း (သို့မဟုတ်ပုံသေ) ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူ သုံး. သင်၏ဖောက်သည်များသည်ထိုအရေအတွက်အားဖြင့်သင့်ကိုသတင်းပို့နိုင်သည်။ အတည်ပြုစဉ်အတွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှကုဒ်ကိုလက်ခံရန် "Call Me" option ကိုရွေးချယ်ပါ။ • WhatsApp Messenger နှင့် WhatsApp Messenger နှင့် WhatsApp စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောဖုန်းနံပါတ်ရှိရမည်
Multimedia မှအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ, အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ *, အုပ်စုလိုက်စကားဝိုင်းများနှင့်အော့ဖ်လိုင်းများနှင့်အခြားအရာများ, အသေးစိတ်အတွက်သင်၏ပံ့ပိုးသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
မှတ်ချက် - WhatsApp Messenger မှ WhatsApp Messenger သို့ပြန်ပို့ရန် Chat Backup ကိုပြန်ယူပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုသင်ပြန်ယူနိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေ။ သင်ပြန်လိုပါက WhatsApp လုပ်ငန်းကိုမသုံးမီ WhatsApp Messenger ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူရန်အကြံပြုလိုသည်။
----------------- ------------------------------------------- ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အမြဲနေ
သင့်ထံမှကြားနာရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ သင့်တွင်အကြံဥာဏ်များ, မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ပို့ပါ။
--------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Status Saver Video daungglud
khun Aung naing Khun chit naing